Google Drive ကို အကျိုး ရှိရှိသုံးကြမယ်။ – Internet Bawdar
စာတွေရေးပြီး ဘယ်မှာသိမ်းလို့သိမ်းထားရမှန်းမသိပဲ ရှုပ်နေတာမျိုးရှိလား
အခုလို covid ကာလမှာ အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှ
ာ အသုံးများတဲ့ Google Drive  နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Google Drive မှာဆိုရင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊
ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲဘဲဖြစ်ဖြစ် ရေးထားတဲ့စာတွေကို သေသေသပ်သပ်
ဒါဆိုရင် အရင်ဆုံး Google Drive ဆိုတာဘာလဲ?
သုံးရခက်လား? ဘယ်လိုစသုံးကြမလဲဆိုတာ​တွေကို ဖတ်ကြည့်ကြရ​အောင်​နော်။
Google Drive ဆိုတာဘာလဲ ???
Google Drive ဆိုတာ Google ကနေတီထွင်ထားတာဖြစ်ပြီး Files တွေကို အဲ့ဒီထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားလို့ရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Google Drive  မှာ အခမဲ့ version နဲ့ ပိုက်ဆံသွင်းသုံးရတဲ့ version ဆိုပြီး version နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အခမဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင် 15GB အထိ file ​တွေကိုသိမ်းဆည်းလို့ရပြီး၊ ပိုက်ဆံသွင်းရင်တော့ 30GB အထိသိမ်းဆည်းလို့ရပါတယ်။
Google Drive  မှာဆိုရင်  File တွေအများကြီးကိုတစ်ပြိုင်တည်းလဲဝေမျှထားလို့ရပါတယ်။
ဒါဆိုအခု ဒုတိယ​နဲ့ တတိယမေးခွန်း​တွေအတွက် သုံးရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြောပြသွားမယ်နော်။
Google Drive ကိုသုံးဖို့ဆိုရင် အရင်ဆုံး gmail account တစ်ခုတော့ လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
Gmailထဲဝင်ပြီးရင် “‘drive.google.com” ကိုရေးထည့်ပြီး Google Drive  ထဲသွားလို့ရပြီ။
Google Drive ထဲရောက်ပြီဆိုရင် ဘယ်ဘက်နားလေးမှာ
“Shared with me” စတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကို ပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီထဲမှာမှ ဥပမာ ကိုယ်က စာရေးစရာရှိတယ်ဆိုရင် New ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ရေးချင်တာက
Google Docs (word document)  ထဲမှာလား
Google Sheets သုံးမလား
Google slides ရောသုံးမလား
Google Forms အသုံးပြုမလား
အဲ့ဒီလို ကိုယ်သုံးချင်တာတွေကို ရွေးပြီး ရေးပြီးရင်လည်း
Google Drive ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားလို့ရပါပြီ...မီးပျက်လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်
ကွန်ပျူတာချို့ယွင်းချက်​​​​ကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် ကွန်ပျူတာကြီးက
မပူရပါ​တော့ပါဘူး။ Google Drive က automatically save လုပ်ထားပေးတဲ့အတွက်ပါ။
နောက်ထပ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့အချက်ကတော့ ကိုယ်ရေးထားတဲ့စာတွေ၊ စုဆောင်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေကို သူများတွေကိုမျှဝေပေးချင်တယ်ဆိုရင် ညာဘက်အပေါ် လေးမှာ “Share” ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် Share with people and groups လို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ကိုယ့်အချက်အလက်နဲ့ရေးထားတာတွေကို မျှဝေပေးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်း သို့မဟုတ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့ အီးမေးလ်ကိုထည့်ပြီး Done လို့နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါဆိုရင် ကိုယ့်စာတွေကိုပြချင်တဲ့သူ၊ စာအတူတူပြင်စေချင်တဲ့သူဆီရောက်ရှိသွားပါပြီ။
ကိုယ့်စာတွေကို ပြင်နေတဲ့အချိန်တစ်ပြိုင်ထဲမှာလည်း ကိုယ် မျှဝေထားပေးတဲ့ တစ်ဖက်ကလူလည်း အတူတူ ကိုယ့်စာတွေကို လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို edit လုပ်ပေးလို့ရပါပြီ။